ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
တစ်ဦးပြန်လည်စှဲလမျးသူ၏မိတ်ဖက်အတိုင်း, သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးတာဝန်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်။ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုချိတ်ဆက်နေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း, ယောဂ, ဘာဝနာ, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်နှင့်သငျသညျကိုခံစားဖန်တီးမှုလှုပ်ရှားမှုများစဉ်းစားပါ။ အားလုံးသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အထဲကခွဲထားခဲ့သည်ရရှိနေချိန်မှာချိန်ခွင်လျှာ၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်သည်။ မိတ်ဖက်များနှင့်စွဲနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ဤစာမျက်နှာတွင်.
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏စွဲလမ်းမှုသည်သင့်အကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်သင်“ ညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်လုံးကဲ့သို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း” မရှိပါ စွဲဘယ်တော့မှ "ကျေနပ်မှု" နိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးလျှင်ပင်ပူပြင်းသည့်နှိုးဆွခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏တိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်။
သငျသညျ နိုင်, သို့သော်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ စုံတွဲများသည် amygdala တည်ငြိမ်အောင်မှရိပ်မိခြိမ်းခြောက်မှုများမှ overreacts သောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကို Bond အပြုအမူတွေကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသောအခါ, လွန်စွာအသစ္စာဖောက်ရာမှအနာပျောက်စေသောအဖို့ပူးတွဲကြောက်ရွံ့ခြင်း, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စွဲလမ်း၏စိတ်ဒဏ်ရာကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်အစစ်အမှန်သည်အနာပျောက်စေသောအဘို့စင်မြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သော့ကိုဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သောအမျိုးအစားနေ့စဉ်ချစ်ခင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါသည်: မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို သို့မဟုတ် karezza လိင်: Karezza (လွန်း) စွဲအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ.
တစ်ဦးပြန်လည် porn စှဲလမျးသူ၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရေးသားခဲ့သည်:
အပေါင်းအဖေါ်များ "နာလန်ထူထဲမှာ;" မဟုတ်ကြှနျုပျတို့သညျ "စိတ်ဒဏ်ရာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ" ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ဟူသောဝေါဟာရကို "အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ" ပေါ်တွင်လည်းစိတ်အားထက်သန်ဘူး။ ဒီ "ကင်ဆာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ" နဲ့များတွင် lumped ရလေ့ရှိတယ်ငါပင်ငါနှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားရပုံကိုသို့သွားချင်ကြပါဘူးအဖြစ်!
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခံစားမိပါဆုံးအထောကျအကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့, သင့်ရဲ့ site ဟာပြန်လည်နာလန်ထူ site ကိုမဖြစ်သော်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကများသောအားဖြင့်လုပ်ဖို့ငြိမ်းစေလျက်အများကြီးရှိခြင်း Karezza သင်ယူလိုသော။
ဒီတော့ ... သင်ကအပိုင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကဲ့သို့နှောင်ကြိုးစိတ်ဒဏ်ရာအရင်းအမြစ်များရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လူတွေအနေနဲ့လုပ် SA ၏မိတ်ဖက်အပါအဝင်ထံမှအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်လိုအပ်ကြောင်းစိတ်ဒဏ်ရာမဆိုအမျိုးအစားပါဝင်မည်ဖြစ်သည်ရွှေငွေများကိုအဝေး။
လက်ရှိတွင် www.RebootNation.org's section သည်အကြောင်းအရာစွဲသူများ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်မည့်သို့မဟုတ်လျှော့ချမည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမိတ်ဖက်များကခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ဤအချိန်အတွင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမည်သို့ထောက်ပံ့ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင် Karezza လုပ်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်။ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကွာရှင်းခြင်း။
ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၏အိမ်ထောင်ဖက်ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုကို attachment-based, ကသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာသတင်းပို့ရာ "ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်" လူများ, အတူပြုလေ၏ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကိုယ်ကငါ့အဘို့ငွေကိုပေါ်မှာရှိသမျှညာဘက်တွေ့ကိုယ့်နက်ရှိုင်းစွာဝိညာဉ်ရေးရာ, ဘာသာရေးဘူး။ ငါသည်ဤအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကုထုံးစွဲ၏မိတ်ဖက်နှင့် ပတ်သက်. ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောအရေးကြီးသောအပိုင်းအစကြောင်းရှာပါ။ Karezza အင်ဖိုပေါင်းစပ်အတူကပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်။
အဆိုပါလူကြီး Pair ကို-ဘွန်းဆက်ဆံရေးအတွက်နှောင်ကြိုးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် Concomitant လှညျ့စားခွငျးမယားများ '' အချင်းယောက်ျား၏အတွေ့အကြုံ ''
Spencer တီ ZITZMAN နှင့်မာကုအိပ်ချ် Butler အားဖြင့်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစုံတွဲနှောင်ကြိုးကြားဆက်ဆံရေးကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းအထောက်အထားများတိုးများလာနေသည်။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလှည့်စားခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်စုံတွဲကုထုံးတွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်မှု - စုံတွဲနှစ်တွဲဆက်နွယ်မှုရှိအမျိုးသမီး ၁၄ ဦး ၏အင်တာဗျူးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းသည်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းတို့မှပူးတွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုသုံးခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (၁) ဆက်ဆံရေး၌ပူးတွဲမှုအမှားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ (14) နောက်ကွယ်မှဇနီးများ၏ခင်ပွန်းသည်နှင့်ဝေးကွာခြင်းနှင့်အဆက်ပြတ်ခြင်းများကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတွယ်ကပ်တွယ်တက်မှု၊ (1) ဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကနေပူးတွဲမှု estrangement အတွက်အထှတျအထိ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဇနီးများသည်ပူးတွဲဖိုင်များပြိုကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်တွဲဆက်မှုနှောင်ကြိုးဆက်နွယ်မှုတွင်လိမ်လည်လှည့်စားခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုပူးတွဲအသိပေးသည့်ပုံစံကိုတည်ဆောက်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကစွဲ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသင်ယူကြောင်းအကြံပြုသည် porn စွဲ၏သိပ္ပံ။ သငျသညျအကွောငျးကိုဘာမျှသိလျှင်, ဒီတိုတို TEDx ဟောပြောပွဲနှင့်အတူစတင်: မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။
ပိုများသောသုတေသန porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လိုထွက်ကြွလာ:လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။
စွဲလမ်းသူအတွက်မည်မျှဆိုးဝါးသောရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်လည်းအသုံးဝင်သည်။ porn စွဲကနေဆုတ်ခွာတူသောအဘယ်အရာကိုကြည့်သလဲ, တကယ်တော့အချို့စွဲချွတ်ခြင်းနှင့်ပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ထပ်တလဲလဲဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေခံရ .: Post-စူးရှဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ (ယက်) porn စွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ပါသလား?
porn အကြောင်း New Yorker အပေါ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မှတ်ချက်များ